Misokatra ho an'ny mponina ao New York, New Jersey ary Connecticut i Curaçao
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Curacao » Misokatra ho an'ny mponina ao New York, New Jersey ary Connecticut i Curaçao
Taorian'ny volana niandrasana volana maro dia nanambara tamim-pahavitrihana ny fisokafan'ny sisintany ho an'ny mponina ao New York, New Jersey ary Connecticut ny Birao Mpizahatany Curaçao. Manomboka amin'ny herinandro voalohan'ny volana novambra, ny mponina amin'ireo fanjakana telo voalaza etsy ambony ireo no amerikana voalohany nahazo alàlana hiditra amin'ny nosy Karaiba holandey mavo any Curaçao satria napetraka ny famerana ny fivezivezena tamin'ny fiandohan'ity taona ity.
Alohan'ny hahatongavanao, ny mpitsidika rehetra dia tsy maintsy maneho porofo fa misy lafy ratsy Covid-19 Ny valin'ny fitsapana PCR dia nitazona 72 ora taorian'ny dia. Mba hanamorana ny fizotran'ny fidirana dia hameno karatra fifindra-monina nomerika ny mpitsidika amin'ny dicardcuracao.com, ampidiro ao amin'ny vavahady ny valiny ratsy, ary fenoy ny karatra Passator Locator (PLC) an-tserasera ao anatin'ny 48 ora alohan'ny hiaingany. Ho fanampin'izay, ny mponina ao New York, New Jersey ary Connecticut dia tsy maintsy mampiseho karatra navoakan'ny fanjakana ho porofom-ponenana.
Ny sidina tsy miato avy amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Newark Liberty (EWR) dia hitohy amin'ny 7 Novambra miaraka amin'ny serivisy isan-kerinandro atolotra any United. Ny volana manaraka, JetBlue dia hanolotra sidina indroa isan-kerinandro avy any New York's John F. Kennedy International Airport (JFK) manomboka ny 9 desambra.
New York, New Jersey ary Connecticut dia manatevin-daharana an'i Kanada sy tsena hafa ambany sy anton'antoka mety hiditra ao Curaçao, izay nantsoina ihany ho iray amin'ireo nosy tsara indrindra any Karaiba amin'ny Loka Choice Readers 'Choice 2020 an'ny Condé Nast Traveler. Ny Birao mpizahatany ao Curaçao - miara-miasa amin'ny Minisiteran'ny Fahasalamam-bahoaka, ny Tontolo iainana & ny natiora, ary koa ny Minisiteran'ny Fampandrosoana ara-toekarena - dia mamaritra ny tsena ambany sy antonony mety miorina amin'ny tarehimarika farany sy ny antontan'isa isaky ny faritany nihaona.
"Rehefa avy nifampidinika tamin'ny vondrom-piarahamonina siantifika sy ny dokotera manan-kaja izahay na ny Netherlands na ny nosy dia nanapa-kevitra izahay ny hamoha tsimoramora ny indostrian'ny fizahan-tany Curaçao any Etazonia," hoy i Paul Pennicook, CEO an'ny Curaçao Tourist Board. "Antony marobe no nojerena tao anatin'izany ny tranga misy ankehitriny, ny fisondrotan'ny fiaramanidina ary ny fiantraikany amin'ny toekarena eo an-toerana, ankoatry ny hafa."
Tao anatin'ny ezaka hitazomana ny vondrom-piarahamonina manerantany sy eo an-toerana, tamin'ny fiandohan'ity taona ity, Curaçao dia nametraka andian-tsarimihetsika momba ny fahasalamana sy fiarovana, mitondra ny marika "A Dushi Stay, the Healthy Way" - dushi midika hoe "mamy" ao Papiamentu. Ny programa feno dia misy ny zava-drehetra manomboka amin'ny fanofanana momba ny mpiasa sy ny fomba fanaingoana ny fiaraha-monina vaovao ary ny torolàlana momba ny fahadiovana sy ny fahadiovana. Ny rafitra fanaraha-maso be pitsiny tantanan'ny biraon'ny fahasalamam-bahoaka ao amin'ny nosy dia misy koa antso an-tariby ho an'ireo mpitsidika tonga rehetra mandritra ny fotoana niainany tao Curaçao.
Ho fanampin'izany, mba hanamafisana mora foana ny fampahalalana rehetra mifandraika amin'izany, ny birao fizahan-tany dia namorona rindranasa finday antsoina hoe "Dushi Stay." Iray amin'ireo fampiharana voalohany amin'ity karazana ity, ny Dushi Stay dia manome fidirana ho an'ny mpandeha ny fepetra takiana amin'ny fidirana, ireo kavina vaovao manerana ny nosy, ny nomeraon'ny vonjy taitra ary ny toro-hevitra momba ny fahasalamana, ary koa ny fisakafoanana misokatra, fisarihana, torapasika, sns.
"Hanohy hanara-maso akaiky ny fivoarana manerana an'i Etazonia izahay," hoy i Pennicook. “Satria nankafy ny fitomboan'ny isa indroa avy amin'ny tsenan'i Etazonia izahay tao anatin'ny roa taona lasa ary ny kaonty amerikana dia ampahany lehibe amin'ny fahatongavan'i Curaçao fizahan-tany, dia manantena ny fisokafan'ny tanàna vavahady hafa izahay raha vantany vao mamela ny fepetra hahafahan'ny Amerikanina dia afaka manohy miaina io toerana tsy ampoizina io. ”
Dominica dia mandefa programa 'Safe in Nature' ho an'ny mpitsidika
Vonona handray ireo mpitsidika ny Nosy Grand Bahama amin'ny 15 Oktobra